Real HGH Thailand - Genotropin GoQuick Pen 12mg amin'ny fivarotana any Thailand
Regular vidiny 0.00 ฿ 91,000.00 ฿ Sale
Miorina amin'ny fanavaozana 18 Soraty ny famerenana
- Tavoahangy toaka
- BD Ultra Fine Needles
- Fitsaboana ara-pahasalamana ara-pahasalamana (2-8 temperato temperatura)
Torolàlana ampiasaina (PDF file)
Active material: Somatropin
CCF: Ny hormone fitomboan'ny fambolena
Manufacturer: PFIZER MFG. BELGIUM NV (Belzika)
Ny hormone fitomboan'ny rongony. Izy io dia mifanaraka amin'ny teknôlôjika recombinant somatropine, mitovy amin'ny hormone fitomboan'ny olombelona. Ankizy tsy manana hormone mitombo amin'ny endogen, ary ny aretina Prader-Willi somatropin dia mampitombo sy mampitombo ny fitomboan'ny karaoty. Tahaka ny amin'ny olon-dehibe, ary ny zaza somatropin dia mitazona rafitra ara-dalàna, mampitombo ny fitomboan'ny taola-maina ary mampiroborobo ny fanetsiketsehana ny tavy. Indrindra indrindra amin'ny fahantrana amin'ny fiterahana somatropin visceral. Ankoatra ny fifehezana ny lipolysis, ny somatropine dia mampihena ny fidiran'ny triglycerides amin'ny tahiry matavy. Ankoatra izay, misy fiantraikany amin'ny fatran'ny kôbinina sy ny siramamy amin'ny rano ny fanafody. Somatropin dia mandrisika ny mpitsabo LDL amin'ny aty, ary miasa amin'ny lipid sy ny lipoprotein amin'ny serum. Amin'ny ankapobeny, ny fametrahana marary somatropin amin'ny hormone tsy mitombo dia mampihena ny fihenan'ny koloroola LDL sy ny apolipoprotein B amin'ny serum. Ankoatra izany, mety hisy ny fihenan'ny cholesterol tanteraka. Somatropin dia mitombo ny fiantohana ny insuline, Na izany aza, dia tsy miova ny lanjan'ny glucose amin'ny ankapobeny. Ireo zaza manana hypopituitarism dia mety mahatsapa fifindran'ny hypoglycemia, miaraka amin'ny marary mahazo ny zava-mahadomelina. Somatropin dia mamerina ny volam-bolan'ny plasma sy ny tavy, mihena amin'ny tsy fahampian'ny hormonina mitombo; mampiroborobo ny fitehirizana siramamy, potassium ary phosphorus. Somatropin dia mandrisika ny metabolisma amin'ny taolana. Ao amin'ny marary mitombo ny hormone tsy mitombo sy ny osteoporosis somatropin ny fitsaboana maharitra dia mitarika ny fihenan'ny fitambarana mineraly sy ny dity ny taolana. Ny fitsaboana amin'ny somatropine dia mampitombo ny tanjaka sy ny fiaretana ara-batana. Ny somatropin koa dia mampitombo ny vokatra ateraky ny fo, fa ny mekanika amin'io vokatra io dia mbola tsy fantatra. Ny anjara asany dia mety hiteraka fihenam-bidy amin'ny fanoherana ny vascular. Ny marary mitombo ny hormone dia mety hihena ny fahaiza-misaina sy ny fiovan'ny toe-tsaina. Manatsara ny fahamendrehana ny Somatropin, Manatsara ny fahatsiarovan-tena sy ny fiheverana ny neurotransmitter ao amin'ny atidoha.
Famaranana sy fizarana
Tahaka ny amin'ny olona salama, ary ny marary mitombo ny hormone mitombo dia mitombo manodidina ny 80% n / a ny Genotropin®. Rehefa voan'ny pN / XJXX IU / kg ny vatan'ny Cmax dia 0.1-13 ng / ml izay vita taorian'ny 35-3 no. Vd dia 6-0.5 l / kg.
Ny metabolisma sy ny fandroahana
Biotransformiroetsa ny voa sy ny aty. Mitombo isa T1 / 2 aorian'ny Genotropin® ao amin'ny marary amin'ny tsy fahampian'ny hormone mitombo dia manodidina ny 0.4 no. Rehefa tonga amin'ny / ny fampidirana ny zava-mahadomelina T1 / 2 dia tonga amin'ny 2-3 no. Ny fahasamihafan'ny voamarina, angamba, mifandray amin'ny fihenan-tsakafo kely amin'ny tsindrona n / a. Momba ny 0.1% fanafody fitsaboana amin'ny endrika tsy miova amin'ny vatana.
Pharmacokinetics amin'ny toe-pahasalamana manokana
Ny habetsahan'ny biotechnologie amin'ny Genotropin® raha toa ka amin'ny lahy sy ny vavy.
Ny voka-dratsiny, vokatry ny fihazonana ny rano: olon-dehibe (> 1% sy <10%) - ny fiterahana peripheral, ny tendrony ambany, ny artralgii, ny mialhy ary ny paresthesia. Ny vokatr'izany matetika dia malefaka na malefaka, Izany dia mitranga mandritra ny volana voalohan'ny fitsaboana ary mihena tsikelikely na aorian'ny fampihenana ny doka. Ny hafanan'ireny singa ireny dia ny Genotropin®, ny taonan'ny marary, ary, angamba, mifanohitra amin'ny vanim-potoana, izay tsy fahampian'ny hormonina mitombo. Ao amin'ny ankizy dia mahalana ireo fiantraikany ireo (> 0.1% sy <1%). CNS: mahazatra (> 0.01% sy <0.1%) - tsara fanahy hypertension tsara, dia mety mitombo ny harefo. Avy amin'ny rafitra endocrine: mahalana (> 0.01% sy <0.1%) - fampandrosoana karazana diabetes mellitus 2. Hita ihany koa ny fihenan'ny cortisol serum. Hita fa voafetra ny hevi-dehibe momba izany. Avy amin'ny rafitry ny musculoskeletal: fialokalofana sy subluxation ny lohan'ny lohalika, soprovozhdaющiesя prihramыvaniem, fanaintainana eo amin'ny vala sy lohalika; Ny marary miaraka amin'ny aretin'i Prader-Willi dia mety hampivoatra scoliosis (tsm Genotropin® Manatsara ny tahan'ny fitomboana); Mahalana - myôsitis, izay mety vokatry ny asan'ny m-cresol conservation, izay anisan'ny Genotropin®.
Fihetseham-po tsy ara-dalàna: fihenan'ny hoditra sy fery.
Fanehoan-kevitra avy any an-toerana: amin'ny tranonkala fitsangatsanganana (> 1% sy <10%) - ny fihenjanana, ny taovam-pandevonan-tsakafo, ny fidorohana, ny hyperemia, ny fery, ny lipoatrophy.
Ny hafa: amin'ny tranga vitsivitsy (<0.01%) - Ny fampiroboroboana ny leokemia amin'ny zaza, na izany aza, ny tsy fahampian'ny leokemia dia tsy mitovy amin'ny an'ny ankizy raha tsy mitombo ny hormone.
- Ny soritr'aretin'ny fitomboan'ny fivontosana, anisan'izany ny fitomboan'ny fivontosana tsiranoka indraindray (ny fitsaboana antitumor dia tokony ho vita alohan'ny hanombohan'ny fitsaboana Genotropin®);
- Toe-javatra mivaingana, mivoatra haingana amin'ny marary noho ny fandidiana atsy am-bohoka na ny tsinay, ny marary maro sy ny fahorian-tsaina miverimberina;
- Feno loatra ny fiterahana (ny habetsahan'ny lanjan'ny vatana dia mihoatra ny 200%) na aretina mafy orana amin'ny marary miaraka amin'ny aretin'i Prader-Willi;
- Ny fanakatonana ny faritra mitombo ho an'ny epiphyseal dia ny taolana lava;
- Ny fiheveran-tena ho an'ny ampahany amin'ny zava-mahadomelina.
Tokony hotandremana ny VIH ny marary voan'ny diabeta, ny hypertension ny intracranial, gipotireoze.
FANATSARANA SY LAKATENY
Ny traikefa ara-pahasalamana miaraka amin'ny Genotropin® mandritra ny fitondrana vohoka dia voafetra. Noho izany, mandritra ny fitondrana vohoka dia tokony hamarinina tsara ny filana ny fametrahana ny zava-mahadomelina sy ny mety ho loza aterak'izany. Nandritra ny vanim-potoan'ny vohoka ara-pahasalamana ara-pahasalamana dia mihena ny hormone rehefa mihena ny 20 amin'ny herinandro, ary tsy dia azo atao mihitsy ny manolo-tena amin'ny herinandro 30, ary noho izany dia tsy voatery ny ilàna ny fitsaboana fanafody Genotropin® amin'ny telo volana fahatelo. Ny fikarohana ara-panandramana ny biby dia tsy nanambara ny fiantraikany ratsy eo amin'ny foetus, izay tsy tokony hisy izany, fa ny valiny mitovy amin'izany dia ho azo amin'ny fampiharana ny Genotropin® olombelona. Tsy misy ny fampahafantarana azo antoka momba ny fandroahana ny hormonina mitombo ao amin'ny rononon-dreny, saingy amin'ny lafiny rehetra, dia tsy azo ihodivirana loatra ny fiheverana ny proteinina tsy manan-tsahala ao amin'ny tranom-biby mampidi-doza.
Ireo tranga momba ny Genotropin® dia tsy fantatra. Ny soritr'aretina: amin'ny hormoglycemia mipetaka mahery, ary avy eo ny hyperglycemia. Mety ho tratran'ny aretina mitombo ny hormone (akromegalija, gigantizm), ny aretina mahazatra. Fitsaboana: fanesorana ny zava-mahadomelina, fitsaboana simptomaticheskaya.
Ny GCS amin'ny fampiharana mivantana dia mampihena ny fiantraikan'ny Genotropin® amin'ny fandrosoana. Azo ampiasaina amin'ny fampiasana Genotropin® miaraka amin'ny hyperthyroidism malemy ny tiroxine.
FANAZAVANA NY FAMONJENA
Ny fanafody dia alefa eo ambanin'ny prescription.
FANAZAVANA SY FITSIPIKA FOTSINY
Ny fitsaboana dia tokony ho voatahiry tsy ho tratran'ny ankizy, toerana maizin'ny hafanana amin'ny 2 ° mankany 8 ° C. Tontolon'ny fiainana - taona 3. Ny vahaolana vita dia azo alamina ao amin'ny vata fampangatsiahana (amin'ny hafanana amin'ny 2 ° ka hatramin'ny 8 ° C) mandritra ny herinandro 4. Aza manadrohadro na cartridge, tsy misy vahaolana voaomana.
Share Share on Facebook Tweet Tweet tao amin'ny Twitter Pin It Pin ao amin'ny Pinterest